4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #1
Tenerife, Arona, Buzanada, Diseminado	4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Real estate company ETEN CANARIAS
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #2
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #3
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #4
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #5
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #6
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #7
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #8
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #9
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #10
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #11
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #12
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #13
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #14
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #15
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #16
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #17
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #18
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #19
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #20
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #21
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #22
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #23
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #24
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #25
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #26
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #27
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #28
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #29
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #30
4 Bed Villa - Buzanada - Arona. Reference: 131. Picture #31
Property located in Buzanada, a quiet area within the municipality of Arona. Only a few km from the residential area of ​​Parque de la Reina with its schools, shops, parks and a few café-restaurant. A few minutes from the motorway, and the Golf Courses “Golf del Sur” and Amarilla Golf ". Reina Sofia Airport only 10 km.
Attractive property located in Buzanada. The property has a 400m2 villa on two floors. On the ground floor is a fully independent apartment with 2 bedrooms, 1 kitchen, 1 bathroom and lounge. Besides we have a big garage for 4 cars. This tier is on the same level as the garden and pool. On the second floor are the 4 bedrooms, one of them with a spacious wardrobe, 2 bathrooms, large kitchen - diner and lounge. The property is surrounded by a beautiful garden with private pool, fruit trees and plants with breathtaking views of the ocean and neighboring islands. The villa is sold furnished with classic furniture and high quality.